Fikaonan-dohan’ny minisitra Frankôfôna:MIVERINA AMIN’NY LAONINY NY TOERAN’I MADAGASIKARA -
AccueilRaharaham-pirenenaFikaonan-dohan’ny minisitra Frankôfôna:MIVERINA AMIN’NY LAONINY NY TOERAN’I MADAGASIKARA
Nanomboka omaly tolakandro ny fikaonandohan’ny minisitra Frankôfôna andiany faha-32 na ny « 32ème session de la conférence ministérielle de la Francophonie ». Ny Minisitra ny Raharaham-bahiny malagasy, Attalah Béatrice no Filoha nitarika ny Fivoriana fa nanotrona fotsiny ny sekretera jeneralin’ny Frankôfônia, Michaëlle Jean. Ireo lehibena diplomasia any amin’ny taniny avy no nandray anjara. Izany hoe ireo firenena 50 mpikambana sy ny mpanara-maso misa 30 no mivory ao mandritra ny roa andro. Fivoriana fanomanana sy hanapahana izay zavatra ho dinihan’ireo Filoham-panjakana hivory amin’ny sabotsy 26 sy alahady 27 ho avy izao no tena ataon’izy ireo. Ankoatra izay anefa dia dinihina ihany koa ny raharaha anatiny, ny seha-pifandraisan’ny firenena samy firenena, ny asa mbola tokony hatao hanampiana ireo osaosa, ny mbola ady an-trano misy etsy sy eroa. Tsy izay ihany fa eo koa ny fandinihana ny tetibola ampiasaina sy ny tatitra momba ny zava-bita. Tsy ambanin’izany koa anefa ny adihevitra mikasika ny vaovao manaren-tany ary tsy azo lalovam-potsiny izany satria misy fivoarana lehibe izany hatramin’ny naha filohan’ny Etazonian’i Amerika an’i Donald Trump.
Mitana ny laharana fahatelo
Isan’ireo fikambanana iraisam-pirenena mitana ny laharana fahatelo maneran-tany ny vondrona frankôfônia na ny Oif ka izay no tsy maintsy hanarahan’izy ireo ny vaovao maneran-tany. Tahaka ny ahoana ny fitsokan’ny rivotra manerana izao tontolo izao. Ny resaka politika moa tsy dia hibahan-toerana mandritra ny fvoriana araka ny paikadin’ny sekretera jeneraly kanefa dia tsy maintsy iadiana hevitra ny momba ireo firenena mpikambana izay mbola lalovan’ny krizy politika amin’izao fotoana izao. Tsy maintsy hijerena vahaolana ireny ary amin’itony raha fivoriana itony no handinihana ny momba azy. Tsy mora fa tena manahirana ny fehi-pitsipika ao anatin’itony vondrona iraisam-pirenena goavana itony. Ny antony dia tapahin’izy ireo avy hatrany ny fifandraisana sy ny fanampiana raha vao misy tranga tsy mifanaraka amin’ny fitsipika miseho. Taorian’ireny krizy lava reny ireny dia azo tsapain-tanana ny fiverenan’i Madagasikara eo amin’ny toerany manerana izao tontolo izao. Raha nisy ny famaizana mafy indrindra nahazo an’i Madagasikara tamin’ireny fotoana ireny dia tao anatiny ny Oif. Amin’izao fotoana izao anefa dia tantara sisa izany satria efa niverina naka ny toerany i Madagasikara ary ny fitondran-dRajaonarimampianina amin’izao fotoana izao no tena nanao ny ezaka rehetra nahatonga izany. Mipetraka ho tantara amin’ny taranaka faramandimby ny fandraisantsika ny fivoriana an-tampon’ny Frankôfônia andiany faha-16.